Mudaharaad logu diidan yahay Tacadiga Galmudug ay kula kacday Ugaaska Sade oo Cabudwaaq ka dhacay. | Kismaayo24 News Agency
Mudaharaad logu diidan yahay Tacadiga Galmudug ay kula kacday Ugaaska Sade oo Cabudwaaq ka dhacay.
Saturday October 29, 2016 - 7:56 under Somali News by admin
Magaalada Cabudwaaq ee Bartamaha Somalia waxaa ka dhacay Isu soobax shacabka reer Cabudwaaq ay ku diidan yihiin Tacadiga Galmudug iyo Gudiga Doorashada Galmudug ay kula kacday Ugaaska Beesha Sade Ugaas Axmed Barre Takooy.
Banaanbaxaan oo ay ka hadleen Siyaasiyiin,dhaqan,dhalinyaro iyo haween iskugu jiray jifooyinka kala duwan ee Sade ayaa waxaa lagu mujiyay sida Beesha Sade bari ay uga xun tahay Xadgudubkii Maamulka Galmudug iyo Gudiga doorashada Galmudug ay u gaysten Ugaaska Beesha Sade.
Maxamed Cabdilahi Xasan oo ka mid ah Aqonyahanada ka so qayb galay Kulankaasi ayaa waxaa uu sheegay in Galmudug ay noqotay meel beesha Sade lagu dulmo .
Maxamed asago hadalkiisa sii wata ayaa waxaa uu yiri” hadaba waxaan Beesha Sade wax uga taabanaya Tacadiyaada Galmudug ay nagu samaysay 30 ki bari ee ugu danbeyay.
1- Maamulka Galmudug waxa uu si aan Cadaaladii ku jirin u maamulay Xubnihii Aqalka sare waxana beesha uu siiyay Saami le,eg midla la siyay Beesha Duduble
2- Maamulka Galmudug ee la wada dhisay Ciidamadii lo tababaray laguna qalabeyay qalabki ummada somaliyeed ay wada lahayd waxaay si cad uga qayb Qateen Duulankii Balicad lagu soo qaaday waxaayna meeshaas xasuuq ugu gaysteen Shacab ka tirsan Beesha Maxamed Aman reer,
3- Maamulka Galmudug waxaa uu ku Xadgudbay dhaqankii soo jireenka ahaa ee Beesha Sade waxaana uu Hotelkii uu dagana ka saaray Ugaaska Beesha Sade Axmed Barre Cali Takooy waxa uu sido kale xurmo daro kula dhaqmay Odayaashii Saxiiixeyaasha ahaa ee dhanka Beesha Sade ka soo jeeday.
4-Maamulka Galmudug waxaa uu bishaan Gudaheeda dhacay Rashiinkii Dowlada Turkiga ay ugu tala gashay Galmudug oo waqooyiga Galgaduud ay ku lahayd 5000 kun oo kiish.
5- Maamulka Galmudug waxaa uu isdaba marin ku sameyay 21 shaqaale ah oo Galmudug oo dhan logu talagalay kuwaas oo musharadkooda ay bixinayso World Bank.
Dhaman xadgudubyadaan kor ku xusan Maamulka Galmudug waxaa uu beesha Sade kula kacay 30 ki maalmood ee la soo dhafay bal ka warama sanadkii aan ka tirsanayn muxu no gaystay maxanse ka faaidnay.” ayu Maxamed hadalkiisa ku so gabagabeyay.
Dhanka kale kulankaan waxaa ka hadlay Odayaal dhameed, dhalinyaro, haween ayado dhamaantoodba ay diirada wada saareen sida ay uga xun yihiin dhabaatada Ugaaskooda logu gaystay Magaalada Cadaado waxaayna ku baqeen in Maamulka Galmudug iyo Gudiga doorashada Galmudug ay rali galin ka bixiyaan xadgudubkii ay u gaysteen Ugaaska .
Sido kale waxaay garab istaag u mujiyeen Ugaaska beesha Sade Axmed Barre Cali Takooy iyo mowqifkisa ku adan in aysan Galmudug u yeerin cida noqonaysa Xildhibanka iyo meesha u ka imanayo,
Kismaayo24 waxaay dhawaan idin soo gudbinaysa Sawirada Kulankaan iyo Muqaal laga soo duubay kulankaan kalsoonida logu mujiyay Ugaaska Beesha Sade,